Iibhotile zoyilo zesiko, iibhotile zeVodka, iibhotile zeWhisky- iChengfeng
Iibhotile zoYilo zoLuntu
Iibhotile ezincinci zeOrder
Iiglasi zeBhola ekhatywayo
Iiglasi zethu zinegalelo kwimpilo ecocekileyo nococekileyo!
Uhambo lokuhamba ngomkhumbi, umanyano kunye nenkqubela phambili, ubulungisa kunye nokuxhamla kunye, ukuthatha uxanduva!
Ukuze ube ngumqhubi wenqwelomoya osembindini wesiphelo esiphakathi, ukwenza umahluko kulwenziwo olwenziwe nguwe, nokwenza iimveliso zethu zibaluleke ngakumbi!
Ibhotile yeglasi eyi-750ml
Sigxile kuyilo kunye nokuvelisa naziphi na iintlobo zeebhotile zeglasi yotywala ngemfuno yakho eneenkcukacha. Ukutshintsha ubungakanani beebhotile zotywala kwiibhotile ezincinci ze-50ml ukuya kwi-1.5L, kunye nokukhetha phakathi kwekepusi, i-screw top, kunye ne-corks, kuthetha ukuba ungayilungisa ibhotile yotywala yeglasi ekhethekileyo yohlobo lwakho kunye nenani elincinci loku-odola.
Ukuhombisa ukudubula, ukutywina, ukuprinta kwesilika, ukutyeba, isandblasting, ukukrola, ukutyabeka umbala, iglasi frosting, ipate-surpate, ulwandlalo lwegolide kunye glaze ukutshiza.
Iglasi yewayini eyi-300ml
Iiglasi zewayini eziHlaziyiweyo ezingenasiphelo zizisa ukusebenza kutyekelo oluphambili kuyilo lweglasi yewayini. Yenziwe ngesandla ngokupheleleyo, le nqanawa inelungelo elilodwa lomenzi inikezela ngendlela ekhethekileyo nenhle kakhulu yokuphakamisa iwayini okanye imimoya yakho. Phalaza ngqo kwiseli ye-aeration emiselweyo ngaphakathi embindini weglasi. Iwayini iya kugqobhoza, ibangele i-7oz yewayini enomoya olungele ukukholisa ipallet yakho. Sebenzisa ibhloko yomkhenkce kwi-aerator ukupholisa iwayini emhlophe, iwhisky, okanye icognac njengoko iphakama. Isicoci-mpahla sikhuselekile.
I-Guangzhou ChengFeng Brothers Industrial Company Limited yishishini elinobuchwephesha eligxile ekwenzeni, ukuyila kunye nophando lweeglasi zokugcina eziphakathi. Iindidi zethu zeemveliso zibandakanya udidi lwewayini iiglasi zezipho, iibhotile zodidi lwewayini, iibhotile zamanzi zeglasi, iingqayi zokutya kweglasi, kunye nezinye iimveliso zeglasi ezifanayo.
Inkampani yethu ibekwe e Guangzhou China, kunye ukugcwala lula kunye namalungiselelo ngokukhawuleza, ungakhetha phakathi kaloliwe, umoya, isikhongozeli ulwandle kunye nokuthuthwa komhlaba. Indawo yethu ikufutshane namazibuko aseHuangpu naseNansha, iimpahla zingahanjiswa zisiya kwiindawo ngeendawo zomhlaba jikelele ngezikhongozeli. Sizabalazela ukwenza iimveliso zodidi oluphezulu kwihlabathi liphela-kwindawo ephezulu yeglasi yeglasi kunye neqela leengcali, ulawulo olunamandla kunye nezixhobo zobuvulindlela zeshishini.
Nceda unxibelelane no-odolo!
Inombolo 1, Jiuji Street, Caotang Village, Nancun Town, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China
Imibala yeglasi yeglasi